အကြောင်းမှာဆည်မြောင်းစနစ်သည်ယနေ့ခေတ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၏အရေးပါသောကဏ္ is တစ်ခုဖြစ်သည်, ဤကဲ့သို့လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးစနစ်များရှိသည်. မှန်ကန်သောတပ်ဆင်မှုနှင့်အတူ, ကန့်သတ်နယ်မြေfieldsကကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်, သူတို့သည်မည်သည့်ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မဆိုဝေးဝေးသို့မဟုတ်မိုးရေချိန်မလုံလောက်လျှင်ပင်. ရှိပါတယ်4၏အမျိုးမျိုးသောလယ်ယာမြေဆည်မြောင်းစနစ်များ 1. ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဆည်မြောင်း, 2. Sprinkler ဆည်မြောင်း,3. ယိုဆည်မြောင်း,4. မိုက်ခရိုဆည်မြောင်း,ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်ရေဖျန်းရေပေးစနစ်နှင့်ရေသွင်းရေသွင်းမှုအကြောင်းပြောကြသည်
ယိုဆည်မြောင်းစနစ်သည်သေးငယ်သော poly tubing ကိုထုတ်လွှတ်သူများနှင့်အသုံးပြုပြီးသီးနှံ၏အရင်းအမြစ်ဇုံသို့smallရိယာငယ်တစ်ခုသို့ရေကိုအသုံးပြုရန်အသုံးပြုသည်။. ထုတ်လွှတ်သူများကိုတိကျသောသစ်ပင်သို့မဟုတ်အပင်တစ်ပင်ကိုရေလောင်းရန်လက်ဖြင့်ပြွန်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်. တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်စက်ရုံ၌စက်ကိရိယာတွင်တပ်ဆင်ထားသောယိုထုတ်လွှတ်သည့်ထုတ်လွှတ်သည့်ပြွန်ကိုအသုံးပြုသည်. ယိုစနစ်များကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြွန်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန်မြှုပ်နှံနိုင်သည်. ယိုတိပ်သည်ယိုစိမ့်စေသောဆည်မြောင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးပါးလွှာသောပြွန်တွင်တပ်ဆင်ထားသောယိုထုတ်လွှတ်သူများကိုတပ်ဆင်။ ကွိုင်များ၊. ထုတ်လွှတ်သူတွေဆီကနေကွဲလွဲနေတယ်6ရန် 12 လက်မခွဲ. ယိုတိပ်သည်များသောအားဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများနှင့်ဥယျာဉ်များကိုရေလောင်းရန်အသုံးပြုသော်လည်းဝါဂွမ်းနှင့်ပြောင်းကဲ့သို့သောသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးရန်မြုပ်နှံနိုင်သည်.
မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုလယ်ကွင်းများကိုရေသွင်းရန်အတွက်ရေဖျန်းရေလောင်းပေးသည်, တောင်စောင်း, သို့မဟုတ်ပုံသဏ္.ာန်. လယ်ကွင်းအတွင်းရေဖြန့်ဝေရန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေပေးစနစ်၌ရေဖျန်းသည့်နည်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်.
Hand Move Pipe - ရေဖြန်းသူများသည်ပေ ၃၀ မှ ၄၀ ပေရှိသောအလူမီနီယမ် (သို့) PVC ပိုက်နှင့်ကပ်ထားသည်. ဤပိုက်များကိုကွင်းတစ်ခု၏အပိုင်းသို့မဟုတ်အပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်အဆုံးသတ်ထားသည်. laterals များသောအားဖြင့်ခန့်လေးဆယ်ခွကေိုဆိတ်ကွယ်ရာအကွာအဝေးနေကြသည်.
Solid Set - အမြဲတမ်းမြေအောက် PVC ပိုက်ကိုကွင်းပြင်တစ်ခုလုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။. ဖြန်းသူများအကြားအကွာအဝေးသည်အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ပေ ၄၀ မှ ၁၀၀ ကျော်အထိရှိနိုင်သည်.
စင်တာမဏ္orိုင်သို့မဟုတ်အခြားစက်မှုရွေ့လျားမှုဆည်မြောင်းစနစ်များ - ဤဆည်မြောင်းနည်းလမ်းအတွက်ဖျန်းစက်များကိုတောင့်တင်းသောသို့မဟုတ်ရေပိုက်မှဆုတ်ထားသည့်စက်တစ်လျှောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။. ၎င်းတို့ကိုများသောအားဖြင့်သီးနှံ၏ထိပ်အထက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော်လည်းအချို့သောလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဆည်မြောင်းစနစ်အတွက်မြေနှင့်နီးကပ်စွာထားနိုင်သည်.
Hose Reel (သို့) Travelling Gun Systems - ပိုကြီးတဲ့အရံတစ်ခုပေါ်တွင်ရေပိုက်နှင့်တွဲထားသောလှည်းတွင်ပလက်ဖြူကြီးကြီးတစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်. လှည်းသည်လယ်ထွန်စက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး setup လုပ်ရန်လယ်ကိုဆွဲချသည်, အဆိုပါ reel ကနေရေပိုက် unreeling. ရေစနစ်ကတဆင့်ပြေးသောအခါ, အဆိုပါဖျန်းလည်ပတ်နှင့် reel လှည့်, အဆိုပါရေပိုက်တက်အကွေ့အကောက်များသောအတွက်ဖြန်းခြင်းနှင့်လှည်းဆွဲ.